कोभिड १९ संक्रमणको चिन्ताका बीच कुवेतको सुनसान दृश्य । प्रेम आचार्य
सप्तरीका उमेश यादव क्लिनरका रुपमा कुवेत आएको दुई महिना पनि भएको छैन । विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको ज्यानमारा भाइरस कोरोनाको त्रासका कारण उनको कम्पनी बन्द भयो । उनी टीठलाग्दो स्वरमा सुनाउँछन्, "कम्पनी बन्द छ । जसोतसो खान र बस्‍न दिँदै छ । अब के कसो हुने हो, केही थाहा छैन ।"
सरकारले फ्री भिसाको प्रचार गरे पनि उदयपुरका सुमन दियालीले म्यानपावरलाई ऋणपान गरी मोटो थैली नबुझाई धर पाएनन् । कोभिड– १९ को महामारीमा रोजगारी गुम्ने चिन्ताले उनलाई भित्रभित्रै सताइरहेको छ । दियाली भन्छन्, "रोजगारी गुम्यो भने ऋण कसरी तिर्ने होला ?"
एक महिनादेखि कुवेती क्याटरिङमा काम गर्न थालेका धरानका सुवास राउत पनि ढुक्क छैनन् । उनी थप्छन्, "आठ महिनाको सानो छोरो छोडेर आएको छु, जसोतसो काम गरिरहेको छु, के गर्ने थाहा छैन ।"
म आफू रहेको कुवेतको महाबुल्ला परिसरमा भेटिएका यी नेपाली कामदार अन्योलग्रस्त छन् । हुन त यो थुप्रै देशका कैयौँ कामदारको साझा समस्या हो । यहाँका धेरैजसो कम्पनी बन्द छन् । खुला रहेका कम्पनीहरुले समेत आफैँ जोखिम लिएर काममा आउन निर्देशन दिएका छन् । सार्वजानिक यातायातका साधनहरु चलेका छैनन् ।
कुवेतमा कोरोना भाइरस संक्रमित हुनेको संख्या यो लेख तयार पर्दासम्म १ सय ९१ पुगेको छ । तीमध्ये ३० भन्दा बढी उपचारपछि घर फर्किएको समेत कुवेती स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय अनलाइन पोर्टलहरुले खबर दिएका छन् । ठूल्ठूला सपिङ मलमा समेत चहलपहल एकदमै न्यून देखिन्छ । पाँच जनाभन्दा धेरै भेला हुन नपाइने सरकारी निर्देशन छ ।
अहिलेसम्म नेपाली कामदारहरुलाई कोभिड–१९ देखिएको भने छैन । तथापि सावधानीको विकल्प नरहेको संखुवासभाका विक्रम बर्देवाको बुझाइ छ । अहिलेसम्म कम्पनीले काम बन्द नगरेकामा थोरै हर्षित विक्रम भन्छन्, "काम त चल्दैछ तर कार्यस्थलसम्म जान र आवाससम्म आउन डराउनुपर्ने अवस्था छ । काममा जाँदा र फर्कंदा केही असुरक्षित महसुस भएको छ ।"
गाडीबाट कामसम्म जाँदा कुवेती प्रहरीले पक्रेर घर पठाइदिन्छ कि भन्ने सोचेर आफू बिदा बसेको सुनाउँछन्, नवलपरासीका कृष्ण कँडेल । "नेपाल फर्कौं गएर के गर्ने ? यहीँ बसौँ यस्तो तनाव," कँडेल भन्छन् । कोरोना भाइरसको सन्त्रासका कारण नेपाल लकडाउन भइसकेको हेक्का सायद उनले गरेनन् ।
कुवेत सरकारले संक्रमण रोक्नका लागि साँझ ५ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म कर्फ्यु आदेश जारी गरेको छ । प्रहरीको तैनाथी अनि कुवेती जनताको सुझबुझ नेपालीका लागि समेत उदाहरणीय छ । सिंगो विश्व आक्रान्त बनिरहँदा कुवेत सरकार र यहाँका नागरिकले देखाएको संयम पनि सम्मानयोग्य देखिन्छ ।
झापा, अर्जुनधाराका अग्नि गिरी कुवेती सरकार र नागरिकबीचको समझदारीलाई शिक्षाका रुपमा लिनुपर्ने तर्क राख्छन् । यति सम्पन्न मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत यति ठूलो ह्रास आउँछ भने नेपालमा यो महामारी फैलिए कस्तो होला भन्ने कल्पनासम्म गर्न नसकिने उनको धारणा छ । गिरीको कामना छ, "हामी बरु एक छाक खाएर दुःख भोग्छौँ । नेपालमा कोरोनाको महामारी नफैलियोस् ।"